Chantix® (ချန်းတစ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Chantix® (ချန်းတစ်)
Chantix® (ချန်းတစ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Chantix® (ချန်းတစ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Chantix® (ချန်းတစ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ဆေးလိပ်ဖြတ်ရာမှာ အကူအညီပေးပါတယ်။ အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းတိုးစေရန် ပညာပေး၊ အားပေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း တွေပါဝင်တဲ့ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းအစီအစဉ်နဲ့အတူ ဒီဆေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် ကင်ဆာ၊ နှလုံးအဆုတ်ရောဂါတွေရဲ့အန္တရာယ်တွေမှလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။ ဦးနှေက်အတွင်းဆေးလိပ်သောက်ချင်စေတဲ့ နီကိုတင်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တားခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Chantix® (ချန်းတစ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ပထမနည်းလမ်းကတော့ ဒီဆေးစအသုံးမပြုခင်မှာ ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ့်ရက်ကို သတ်မှတ်ထားရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ့်ရက်မရောက်ခင် တစ်ပတ်အလိုမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ဆေးကိုစအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုစသုံးတဲ့အခါမှာ 0.5-milligramဆေးပြား တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ၃ရက်အသုံးပြု၇မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ 0.5-milligramဆေးပြား တစ်နေ့၂ကြိမ် လေးရက်စာအသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အိပ်မက်ဆိုးမက်ခြင်းကဲ့သို့သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို နည်းအောင် ဆေးပမာဏကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးပေးသွားသင့်ပါတယ်။ ပထမအပတ်အတွင်း ဆေးလိပ်သောက်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ရောက်ရင်တော့ ဆေးလိပ်စဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့၁၂ပတ်စာကုသမှုအချိန်တွေအတွင်း ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ပမာဏကို တစ်နေ့၂ကြိမ်အသုံးပြုသွားသင့်ပါတယ်။
ဒုတိယနည်းကတော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ရက်မရွေးချယ်ရသေးခင်မှာ စအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 0.5-milligramစအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း တိုးပြီးအသုံးပြုသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသမှုပေးနေတဲ့၈ရက်ကနေ ၃၅ရက်အတွင်း ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ရက်ကို ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ထားတဲ့ရက်ရောက်ရင် ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့သုံး ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်တွေကို ဂရုတစိုက်လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကတတိယနည်းလမ်းကို ညွှန်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်လမ်းညွှန်ချက်ကိုသေချာလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီး ညွှန်ထားတဲ့အတိုင်း ဆေးလိပ်ကိုလျှော့ပါ။
Chantix® (ချန်းတစ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Chantix® (ချန်းတစ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Chantix® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
အရင်တုန်းကသုံးခဲ့ဖူးပြီး အောက်ပါအချက်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် မသုံးသင့်ပါဘူး။
ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်မတည့်မှုများ – အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်း၊ လည်ပင်းရောင်ခြင်း
ပြင်းထန်တဲ့အရေပြားတုန့်ပြန်မှုများ- ပါးစပ်ပေါက်ပြဲခြင်း၊ အရေပြားအဖိမ့်များ ကွာကျခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Chantix® (ချန်းတစ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Chantix® (ချန်းတစ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
မအီမသာဖြစ်ခြင်း ( လပေါင်းများစွာ) အန်ခြင်း
အောက်ပါအချက်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆေးရပ်လိြုက်ပီး ဆရာဝန်ချက်ချင်းခေါ်သင့်ပါတယ်။
သတ်သေလို့သည့်အတွေးများ ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိခိုက်နာကျင်စေလိုသည့်အတွေးများ
အိပ်မက်ဆန်းများ ၊ အိပ်နေစဉ်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အိပ်စက်ရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း
စိတ်ကျန်းမာရေးပိုဆိုးရွားလာခြင်း စိတ်ခံစားချက်အပြောင်းအလဲများ၊ စိတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း
နှလုံးရောဂါထခြင်းလက္ခဏာများ- ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ တင်းကျပ်ခြင်း၊ မေးရိုးများပခုံးများအထိပါအောင့်ခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ချွေးထွက်များခြင်း
လေဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာများ- ရုတ်တရက်ထုံခြင်း၊ အားနည်းခြင်း ( အထူးသဖြင့်ကိုယ်တစ်ခြမ်း) ၊ စကားဝါးခြင်း၊ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ မညီမျှမှုများ
ပြင်းထတ်တဲ့အရေပြားတုန့်ပြန်မှုများ- အရေပြားနီခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ ပါးစပ်အတွင်းပေါက်ပြဲခြင်း။ အရေပြားအဖိမ့်များ ၊ ပေါက်ပြဲခြင်း၊ ကွာကျခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Chantix® (ချန်းတစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဒါတွေကို ရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ သင်မှီဝဲနေတဲ့ ဆေးစာရင်းတွေကို ဆရာဝန်တွေဆေးဝါးတတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေကိုပြော ပြထားသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆေးရပ်လိုက်တာမျိုးတွေဆေးစသောက်တာမျိုးတွေ ဆေးပမာဏပြောင်းတာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အင်ဆူလင်၊ theophylline, warfarinစတဲ့ဆေးတွေကို ခနဓါကိုယ်ကဖယ်ထုတ်ခြင်းနည်းလမ်းကို ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီဆေးတွေရဲ့ဆေးပမာဏကို ဆရာဝန်ချိန်ညှိပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Chantix® (ချန်းတစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဒီဆေးက အရက်ကိုပြန်လည်တုန့်ပြန်ခြင်းပေါ်မှာ ပြောင်းလဲမှုပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့လူနာတစ်ချို့မှာ အရက်ကိုခံနိုင်ရည်လျော့သွားနိုင်ပါတယ်။ အရက်ပိုမူးသွားခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုမမှတ်မိတော့ခြင်း စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Chantix® (ချန်းတစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Chantix® (ချန်းတစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပထမနေ့မှ တတိယနေ့- 0.5 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
စတုတ္ထနေ့မှ သတ္တမနေ့ -0.5 mg သောက်ဆေး တစ်နေ၂ကြိမ်
၈ရက်မြောက်နေ့မှ ကုသမှုပြီးသည်အထိ- 1 mg သောက်ဆေး တစ်နေ၂ကြိမ်
ကလေးတွေအတွက် Chantix® (ချန်းတစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Chantix® (ချန်းတစ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးပြား၊ ဖလင်အုပ်ထားသော- varenicline tartrate 0.5mg
Chantix. https://www.drugs.com/chantix.html. Accessed August 1, 2017
Chantix. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-144470/chantix-oral/details#uses. Accessed August 1, 2017